Vivo X50, X50 Pro na X50 Pro +, igwe ọhụụ amalitegoro | Gam akporosis
Vivo X50, X50 Pro na X50 Pro +, ihe atọ dị ike nke na-etu ọnụ maka usoro mmechi ọhụụ
Vivo nwere igwe igwe ohuru ohuru, nke ejiri abuo etiti na otu elu igwe. Ndị a bụ Vivo X50, X50 Pro na X50 Pro, Mobiles nwere sistemụ mgbatị "gimball" narị atọ ugboro karịa nke ugbu a - belụsọ nke mbụ.
Chineselọ ọrụ China gosipụtara ha n'ụdị, na-ekpughe nkọwa nke atụmatụ ya na nkọwapụta teknụzụ na-enweghị ntakịrị ihe niile ọ nwere inye. Anyị na-akọwa ha n'ụzọ zuru ezu n'okpuru.
1 Ihe niile gbasara Vivo X50, X50 Pro na X50 Pro +
1.4 Mpempe akwụkwọ nka na ụzụ
Ihe niile gbasara Vivo X50, X50 Pro na X50 Pro +
Ngwaọrụ atọ a yiri nnọọ nke ọma n'ọkwa. N'ihu ha nwere otu ụdị ahụ, ebe na azụ bụ ebe ihe gbanwere, ihe bụ n'ihi modulu igwefoto ya, nke dị iche na nke anyị na-ahụkarị taa n'ihi ọdịdị ha.
N’agbanyeghi na ha nwere agwa di iche, ha nwegasiri otutu ndi ozo, nke a bu ihe anyi na-eme ugbu a.
Anyị ga-amalite site n’ikwu banyere Vivo X50, ihe kachasị mkpa nke atọ a. Ihuenyo ya bụ teknụzụ AMOLED, ihe a na-eme ugboro ugboro na X50 Pro na X50 Pro +, yana diagonal 6.57-inch na mkpebi FullHD + nke pikselụ 2.376 x 1.080. Nke a, na mgbakwunye na ịnwe akwụkwọ mkpịsị aka agụkọtara ọnụ, nwere oghere na ihuenyo ahụ dị na akuku aka ekpe nke ihuenyo ahụ, yana ọnụego ume ọhụrụ nke 90 Hz, atụmatụ nke anyị na-ahụ na Pro dị iche iche, ma ọ bụghị na Pro +, ebe ọ na-etu ọnụ dị elu nke 120 Hz.
Ihe nhazi nke n’enye Vivo X50 ike bu ihe amarala ama Qualcomm Snapdragon 765G, isi asatọ chipset nke ewepụtara na mbido ọnwa Disemba afọ gara aga. SoC a jikọtara oge a na RAM nke 8 GB na ebe nchekwa nke 128 ma ọ bụ 256 GB. Batrị nke na-enye ya ikike dị puku anọ na narị abụọ na narị abụọ ma nwee teknụzụ na-ebu ngwa ngwa ngwa ngwa 4.200-watt.
Igwefoto ya n'ihu bụ 32 MP, mgbe azụ na-eduzi ihe mmetụta 48 MP, nke a na-esonyere ya na lens telephoto 8 MP, 8 MP wide-angle shooter, na raara onwe ya nye igwefoto 13 MP maka ọnọdụ eserese.
Enwekwara atụmatụ dịka Wi-Fi 5, 5G njikọta ekele maka SoC, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, na USB-C ọdụ ụgbọ mmiri. Sistemụ arụmọrụ nke ihe nlere a bụ gam akporo 10 n'okpuru usoro dị iche iche nke nhazi nke ụlọ ọrụ ahụ, nke bụ Funtouch OS 10.
Vivo X50 Pro adịghị oke iche na Vivo X50 ahụ akọwaburu. Na usoro nke ihuenyo - nke na nke a bụ curved-, processor, RAM nhọrọ na ohere nchekwa na ese foto, enweghị ọdịiche.
Agbanyeghị, na ngalaba ikpeazụ a, nke bụ foto, anyị chọtara sistemu mgbamume nke ụdị gimbal nke kwere nkwa ugboro 300 ịrụ ọrụ nke ọma karịa ndị dị ugbu a, si otú sitere na ihe nyocha anya nke jikọtara ya na usoro axis abụọ, dị ka onye nrụpụta si akọwa. Nsonaazụ a na eserese vidiyo na ntakịrị ntakịrị ịma jijiji.
N'ihe banyere batrị, ọ na-etolite ntakịrị na ụdị a, na-esi na 4.200 mAh ruo 4.315 mAh, mana ọ bụghị na-atụfu ụgwọ ngwa ngwa 3-watt. N'otu aka ahụ, nhọrọ njikọta ga-adị otu.
Ngwaọrụ a bụ ọkọlọtọ. Ya mere, o nwere njirimara na nkọwapụta teknụzụ dị elu karịa nke ụmụnne ya abụọ, dị ka Snapdragon 865, isi asatọ chipset nke na-enye ya ike ma jikọta ya na 8GB RAM na 128GB ROM.
Ihuenyo bụ otu ihe ahụ ọkọlọtọ X50 Pro nwere, mana nke a sitere na inye 90 Hz ume ọhụrụ ruo 120 Hz, n'ihi ya, ọ na-egosi n'ụzọ dị ịrịba ama ịdị ire ụtọ na igbu nke ndịna-emeputa, ihe a na-ahụ anya karị ma e jiri ya tụnyere ogwe 60 Hz.
Sistemụ foto dị na ọnụ a mejupụtara a Obere elekere 50 MP, mgbe ihe mmetụta ya atọ ndị ọzọ bụ otu ihe ahụ dị ka ụmụnne ya abụọ ndị ọzọ: elekere telephoto 8 MP, 8 MP wide-angle shooter, na kamera 13 MP raara onwe ya nye maka eserese eserese. N'ebe a, dịka ị nwere ike ịtụ anya, a na-echekwa usoro mmeziwanye usoro.
Batrị ahụ dịkwa 4.315 mAh, mana ngwa ngwa ọ na-abawanye na 44 W. Ihe ọzọ na-eme ka ọ dịwanye mma bụ Wi-Fi, nke na-abụghịzi mbipute 5, kama 6.
Ndụ X50 PRO
Ndụ X50 PRO +
IKIRU AMOLED 6.56 »FullHD + 2.376 x 1.440 pikselụ / 90 Hz Ntugharị AMOLED nke 6.56 »FullHD + nke 2.376 x 1.440 pikselụ / 90 Hz Ntugharị AMOLED nke 6.56 »FullHD + nke 2.376 x 1.440 pikselụ / 90 Hz
Nhazi Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 865
Ohere TERLỌ N'IME 128 ma ọ bụ 256 GB 128 ma ọ bụ 256 GB 256 GB
Ndị isi Azụ: Onye isi 48 MP + 8 MP Telephoto + 8 MP + 13 MP Wide Angle for Portrait / Ihu: 32 MP Azụ: Onye isi 48 MP + 8 MP Telephoto + 8 MP + 13 MP Wide Angle for Portrait / Ihu: 32 MP Azụ: Onye isi 50 MP + 8 MP Telephoto + 8 MP + 13 MP Wide Angle for Portrait / Ihu: 32 MP
UMUAKA 4.200 mAh na ngwa ngwa 33-watt 4.315 mAh na ngwa ngwa 33-watt 4.315 mAh na ngwa ngwa 44-watt
OS Android 10 n'okpuru Funtouch OS Android 10 n'okpuru Funtouch OS Android 10 n'okpuru Funtouch OS
Njikọ Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.0 / NFC / GPS + GLONASS / 5G Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.0 / NFC / GPS + GLONASS / 5G Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / NFC / GPS + GLONASS / 5G
Atụmatụ ndị ọzọ Na ihuenyo mkpịsị aka agụ / ihu njirimara / USB-C / Gimbal-dị ka ngwa anya stabilization usoro Na ihuenyo mkpịsị aka agụ / ihu njirimara / USB-C / Gimbal-dị ka ngwa anya stabilization usoro Na ihuenyo mkpịsị aka agụ / ihu njirimara / USB-C / Gimbal-dị ka ngwa anya stabilization usoro
Tutu na ibu ibu 7.49mm na 172g 8mm na 180g 8mm na 180g
Emeela ihe atọ a dị ike na China, yabụ ọ dị maka ịzụta ebe ahụ. Ahịa Europe ga-enweta ya ma emechaa -so Vivo enen-, ma a maghị mgbe. Ọ na-anọgide na-eche.
Ọnụahịa akpọsara ha bụ ndị a:
Vivo X50 na 8 + 128 GB: 3.498 yuan ma ọ bụ (~ euro 441 na ọnụego mgbanwe)
Vivo X50 na 8 + 256 GB: 4.698 yuan ma ọ bụ (~ euro 592 na ọnụego mgbanwe)
Vivo X50 Pro nwere 8 + 128 GB: 4.298 yuan (~ 542 euro na ọnụego mgbanwe)
Vivo X50 Pro nwere 8 + 256 GB: Ma erubeghị ọkwa.
Vivo X50 Pro + na 8 + 256 GB: Ma erubeghị ọkwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Vivo X50, X50 Pro na X50 Pro +, ihe atọ dị ike nke na-etu ọnụ maka usoro mmechi ọhụụ
Ndị a bụ atụmatụ ọhụrụ maka 'Nchedo Onwe' na ụra Pixel ka mma
Samsung Galaxy M01 bụzi gọọmentị: asịrị batrị na ọnụahịa nke mbibi